Ksnip: Fampiharana rindrambaiko Qt mifototra amin'ny rindrambaiko Qt ho an'ny pikantsary | Avy amin'ny Linux
Androany isika dia hiresaka momba ny fampiharana maoderina sy mahasoa antsoina "Ksnip". Izay iray amin'ireo fampiharana marobe, ary ny tanjony dia manaisotra ny efijery de nuestros dabilio, izany hoe, izay hita miharihary ao anaty solosaintsika.
fa, "Ksnip" Ankoatry ny maha- maimaim-poana, maoderina ary multiplatform, mamela ihany koa manova sy mizara ny pikantsary dia namboarina sy novaina.
Na dia, manokana eo amin'ny sehatry ny mpaka sary, Matetika aho mampiasa ny fampiharana ny zanako Tontolo iainana Desktop (XFCE sy Plasma), indraindray tiako ny mampiasa sy manoro hevitra Shutter.
Na izany aza, misy maro fampiharana mitovy na hafa tena tsara ho an'ny GNU / Linux, fa Windows o MacOS. Noho izany, etsy ambany dia avelantsika ho an'ireo liana amin'ilay lohahevitra, rohy mifandraika amin'ny fidirana teo aloha amin'ny fampiharana mitovy amin'izany:
"ShareX, ankoatry ny fampiharana maimaim-poana sy misokatra, afaka misambotra na manoratra faritra misy eo amin'ny efijery solosaina, dia afaka mizara ny sary namboarina, mampakatra sary, lahatsoratra na karazana rakitra hafa amin'ny toerana maro azo ampifanarahana sy azo ekena. Antony mahatonga azy io ho mpitaingina efijery tsara, mekanisma fizarana rakitra ary fitaovana famokarana ilaina." ShareX: Open Source App ho an'ny pikantsary amin'ny Windows
Shutter: fitaovana fisamborana efijery tsara.
1 Ksnip: Fitaovana pikantsary sy fanamarihana
1.1 Inona ny Ksnip?
Ksnip: Fitaovana pikantsary sy fanamarihana
Inona ny Ksnip?
Araka ny anao tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, "Ksnip" es:
"Pikantsary sy fitaovana fanamarihana an-tsokosoko. Inona koa, mifototra amin'ny Qt izy io ary manome fiasa an-tsoratra maro ho an'ny pikantsary."
"Ksnip" mandeha ho azy izao 1.9.0 version, izay andro vitsivitsy monja aorian'ny famotsorana azy. Noho izany, amin'izao fotoana izao dia, miaraka amin'ireo maro hafa, ireto toetra sy vaovao manaraka ireto:
Fanohanana marobe: Ho an'ny Linux (X11, Plasma Wayland, GNOME Wayland, ary xdg-desktop-portal Wayland), Windows ary macOS.
fisamborana: Misambotra faritra mahitsizoro azo zahana miaraka amin'ny bokotra totozy, ny efijery / monitor izay misy ny cursor mouse amin'izao fotoana izao, amin'ny efijery iray manontolo, ao anatin'izany ny écran / monitors rehetra, ny efijery fikandrana izay ifantohany ankehitriny, an'ny ny efijery fikandrana eo ambanin'ny kôktera totozy, ankoatry ny fomba hafa na fanaingoana hafa.
anjara: Mifindra pikantsary mivantana mankany amin'ny imgur.com amin'ny endrika mpampiasa na tsy fantatra anarana. Ary ampidiro amin'ny alàlan'ny script manokana nofaritan'ny mpampiasa aza izy ireo.
Ovay: Mora ny manisy an-tsary (manova) ny pikantsary misy penina, marika, mahitsizoro, ellipse, lahatsoratra ary vokatra hafa. Ho fanampin'izany, mba hamelana ny fampiasana ny sticker-nao manokana na manokana, asio effet obfuscation ho an'ny faritra misy ny sary miaraka amin'ny blur sy pixelation, ary ampio ny vokany amin'ny sary (aloka, grayscale, avadika ny loko na ny sisin-tany).
Ho fampiharana azy dia azo apetraka mivantana saika amin'ny rehetra GNU / Distros Linux, Vía Mpitantana fonosana zanatany, sary, na console. Saingy, hampiasa ny dikan-teny farany azonao atao misintona sy mametraka ny fisie ilaina na mety azo ampiharina, avy amin'ireto manaraka ireto rohy ary manaraka ny torolàlana tena an-tsipiriany momba ity iray hafa ity rohy. Raha ampiasaina, dia amin'ny alàlan'ny Menu Applications ihany no tokony hivezivezy.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiharana dia tsy mitovy installers sy kinova, ary ny endrika fametrahana, azonao atao ny mitsidika ireto rohy manaraka ireto amin'ny "Ksnip" ary:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fangatahana maimaimpoana, maimaim-poana ary sehatra hafa antsoina hoe cross-platform «Ksnip», ny mampiavaka azy ankapobeny sy ny vaovao momba ny kinova vaovao «1.9.0» navoaka vao tsy ela; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ksnip: Fampiharana Qt miorina amin'ny rindrambaiko Qt maimaim-poana sy miampita ho an'ny pikantsary
Bitcoin dia mety ho tolo-dalàna any El Salvador